Shagz Chronicles: Ilay rakipeo Keniana izay maniry anao ho tia ny fiteny sy kolontsaina Kikuyu · Global Voices teny Malagasy
Kikuyu (Gĩkũyũ), fiteny Bantu izay olona 6,6 tapitrisa no tena mampiasa azy ao Kenya
Voadika ny 28 Avrily 2022 15:16 GMT
Shagz Chronicles: Rakipeo Keniana iray amin'ny fiteny Kikuyu. Fampiasàna nahazoana alalana.
Fanamarihan'ny mpamoaka lahatsoratra : Manomboka ny 28 Aprily 2022, hitantana ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang ny Shagz Chronicles mba hizara ireo traikefany amin'ny famelomana indray sy fampiroboroboana ireo fiteny afrikanina. Ampahany amin'ny fanentanana mandeha amin'izao fotoana izay eo amin'ny tambajotra sosialy izy io mba hankalazana ny fahasamihafàna fiteny amin'ny aterineto. Vakio bebe kokoa eto ny fanampim-panazavàna mikasika ny fanentanana.
Rakipeo iray izay ahatsiarovan'ireo mpanentana ny fahazazany tamin'ny taona 1990 ny Shagz Chronicles, tany amin'ireo faritra ambanivohitr'i Kenia ary tantaraina amin'ny fiteny Gĩkũyũ (Kikuyu) — fiteny fahatelo tena be mpampiasa ao amin'ny firenena. Entanin'i Wathiomo sy Jehudi (solonanaran'izy ireo), nilaza ireto mpampiara-peo tao anaty lahatsoratra fampahafantarana ny fandaharana fa:
Nahaliana fatratra anay ireo zavatra maro nitranga nanodidina anay. Ity (rakipeo ity) dia nindramina betsaka avy amin'ny fahatanorana, fitiavana te hahalala zavatra, fakàna sary an-tsaina, ireo hanihaninay sy ny fankafizana ny tontolo manodidina anay.
Ao anatin'ny andiany ataonay amin'izao fotoana izao hanasongadinana ny asan'ireo mahery fo mampiroborobo ireo fiteny afrikanina ao anatin'ny habaka nomerika, dia nifandray tamin'ireo mpampiantrano ny rakipeo izahay.
Rising Voices (RV): Azafady lazao anay ny mombamomba anao sy ny asanao mifandraika amin'ny fiteny ?
Shagz Chronicles (SC): Shagz Chronicles dia rakipeo iray izay mikendry ny mba hitiavan'ireo olona ny fiteny Gĩkũyũ (Kikuyu) sy ny fampiasana ny fiteny ho sahala amin'ny tohatra mankamin'ny fahatakarana ny kolontsain'izy ireo. Ny tanjonay dia ny hanabe, hampianatra sy hifandray amin'ireo olona hafa izay mirotsaka handray anjara amin'ny fifanakalozan-kevitra. Ataonay ihay hahatonga ilay teny ho mahafinaritra ny mianatra azy amin'ny alalan'ireo tantara, ireo fiteny fampiasa matetika, ireo ohabolana, sy ny sisa. Ireo tantara izay zarainay dia avy amin'ny fanabeazana anay tao anatin'ny rafitra faha vazimba ho toy ny fomba iray fampiroboroboana ny fiteninay ao anatin'ny habaka nomerika.
RV: Manao ahoana ny fiteninao ankehitriny, amin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto ?
SC: Nahazoanay tombony tsara na ny tao anaty aterineto na ny tsy tao. Matetika tenenina ivelan'ny aterineto foana ilay fiteny ary misy fandrosoana eo amin'ny tanora sy olon-dehibe izay mampiasa azy hifandraisana, indrindra indrindra amin'ny raharaham-barotra noho ny fitongilanana hoe “Mkikuyu ni wa biashara” (olona Kikuyu iray tsy misahirana afa-tsy izay hahazoany vola/fampandehanana orinasa).
Raha ny eo amin'ny aterineto, nisy ireo fandraisana anjara miavaka tamin'ilay fiteny manerana izao tontolo izao. Tamin'ny alàlan'ireo rakipeo sy tononkalo izany. Eo amin'ny YouTube, ohatra, mahita ianareo fantsona marobe fitantaràna sahala amin'ny Jeff Kuria TV, Kikuyu digital TV, ankoatran'ireo hafa. Mampiseho ny mety ho fitomboana izany. Noho ny Aterineto, afaka mahatsapa ho sahala amin'ny ao an-tranonao ianao, na aiza na aiza misy anao manerana izao tontolo izao.
shagz chronicles · SHAGZ CHRONICLES S4 Episode 4 – Ndari ya Mwarimu
RV: Farito ireo fanamby sasantsasany manakana ny fiteninareo tsy ho azo ampiasaina feno amin'ny aterineto. Misy tsy ampy ve eo amin'ny rafitra manokana avy amin'ny fandrafetana ny politika:
SC: Maro ireo olona eo amin'ny tontolo nomerika no manana fihetsika ratsy manoloana ny fampiasana ireo fiteny indizeny satria ampifangaroan'izy ireo amin'ny resaka foko ilay izy.
RV: Farito ireo fanamby teknika sasantsasany sy/na teknolojika manakana ny fiteninareo tsy ho azo ampiasaina feno eo amin'ny aterineto.
SC: Ny fandikàna ilay fiteny. Mpampiasa serasera vitsy monja no mahazo ilay fiteny. Raha toa ireo fitenindreny nomena fotsiny ny fahafahana ho azo nadika sahala amin'ny kiswahili, dia mety hitondra fahasamihafàna sy fiantraikany goavana izany. Afaka hiantoka ny fitomboan'ilay fiteny izany.
RV: Inona avy ireo antony sasantsasany nahatonga anao nisafidy ny hampiasa ny media rakipeo fa tsy ireo vovonana hafa toy ny bilaogy, vlogging na ireo hafa ?
SC: Ho anay, nosafidianay ny rakipeo satria izy io no ahafahan'ireo mpihaino anay hilomano tanteraka ao anatin'ireo fandaharana. Afaka mihaino anay ireo mpihaino na aiza na aiza, na any Kenia ao anaty fiarandalamby, na any amin'ny toerana hafa eto amin'izao tontolo izao eny amoron-dranomasina, satria ny rakipeo koa ahafahan'ireo mpihaino manaraka eo am-pitoerana eo.
RV: Inona avy ireo petrakevitra sasantsasany efa nataonao izay, na nahilika, na nohamafisina ? Ary koa, ny tsy nampoizina ?
SC: Ny tombatombanay dia ny hoe mila fotoana elaela izahay mba hisy fiantraikany, indrindra fa hoe toy ny akany izahay. Ary koa, ilainay ny mampakatra votoaty araka izay vitanay. Tsy fantatray taloha hoe tokana amin'ny karazany ny votoaty natolotray ary tsy maintsy nampitomboinay ny hafainganan'ny famokarana votoaty.
Tsy nampoizinay ny fanekena ny votoaty natolotray. Mandray anjara amin'ireo votoaty ireo mpankafy anay ary mizara izany bebe kokoa sy midadasika kokoa. Amim-panetren-tena no ahalalana hoe misy fiantraikany ny fikirizanay. Fahagagana iray hafa koa fa miresaka amina andian-taranaka telo izahay, toy ny ao amin'ireo taranakay [gen X], ireo arivo taona sy ny andian-taranaka Z.
RV: Araka ny hevitrao, dingana teknolojika toa inona, avy amin'ny orinasan'ny Aterineto na ireo tompona vovonana nomerika, no afaka hamporisika ny fampiasana bebe kokoa ilay fiteny ety anaty aterineto ?
SC: Afaka manomboka amin'ny famolavolana fitaovana nomerika atao amin'ireo fitenindreny ireo vovonana nomerika, ary manohy ihany koa manohana ny fahafahana miditra sy ny fahafahana mifandray.
RV: Ny fitomboan'ny fiteny amin'izao fotoana izao amin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto dia mirona kokoa mankamin'ireo endrika am-bava/feo amin'ilay fiteny, inona no mety ho fiantraikan'izany eo amin'ny endriny an-tsoratra/vakiteny.
Fango famantarana ny rakipeo Shagz Chronicles
SC: Noho ny rafi-panabeazana sy ara-tsosialy, ny ankamaroany dia mirona ho azy mankamin'ny feo fa tsy ny soratra. Tena lafiny iray natokana indrindra ho an'ireo nahita fianarana ambony ny soratra.
Ny fitomboan'ny fiteny am-bava dia misy fiantraikanymiabo amin'ireo endriny ara-tsoratr'ilay fiteny, satria manome fototra tena ilaina amin'ny fahaizana manoratra.
Ny fironana kokoa amin'ny am-bava dia midika ihany koa fa manana tombony goavana isika hanova an'ireo mpikabary ho lasa mpanoratra
RV: Katro-doha ho an'ireo mpiteny ny fiteny sasantsasany izay sendra anao tao amin'ny aterineto na ivelan'ny aterineto ve io? Raha eny, inona no azo atao/no atao mba hiantohana fa tsy mifantoka fotsiny amin'ny feo ireo mpampiasa ilay fiteny na ireo izay maniry hianatra izany ?
SC: Manahy ny amin'ny hahavitsy ireo olona afaka manoratra ilay fiteny ny ankamaroan'ireo mpiteny azy. Mila vovonana iray izahay izay mampivelatra miaraka ny lafiny am-bava sy an-tsoratra amin'ny fiteny, ohatra ny tononkalo, ho anay, dia mahafaoka indray mandeha ny fahaizamanao an-tsoratra sy am-bava.
RV: Inona avy ireo dingana mivangana eritreretinao hoe mety ho azo raisina mba hndrisihana ireo tanora hanomboka hianatra ny fiteniny na hitohy hatrany hampiasa ny fiteniny ?
SC:Ny fampiasàna ny fiteninay amin'ny asa andavanandro. Ny fisiana sy fevelanana any anatin'reo habaky ny fiainana andavanandro. Ny fanabeazana sy fampitàna ilay fiteny amin'ny fomba azon'ny tanora hanakarana azy.